Imephu yeBentley Ngaba kunokuba nzima ngakumbi? -Izixhobo zeGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Bentley Map Ngaba kuba nzima ngakumbi?
Lokudlula Microstation Geographics ku Bentley Map ukuphucuka ukusebenza ukuba esi sixhobo, yaye ke, zama ukunyanzela ukufumana abasebenzisi ezinye izisombululo ezifana MapInfo, ArcView, kwaye ngoku uluhlu lonke lweenkqubo ixabiso eliphantsi kunye nomthombo evulekileyo .
Okwangoku ngoku ndisebenza nomasipala ophakathi rhoqo ofuna ukumilisela isisombululo se-GIS, bandicelile ukuba ndiphakamise uphawu kubo. Ndibacacisele ukuba oku akusebenzi ngoluhlobo, kwaye ngabo ekufuneka bethathe isigqibo, ke sihleli phantsi ukulinganisa ulindelo, phakathi kwento abafuna ukuyenza, imali abanayo kunye neendlela ezizinzileyo ezikhoyo kwinkqubo yabo engenakuphepheka yokutshintsha kwabantu rhoqo emva kwezine iminyaka yemicimbi yezopolitiko.
Emva kokujonga izisombululo ezahlukeneyo, sigqiba kwelokuba abafuni mthombo uvulekileyo okanye isoftware encinci eyaziwayo. Kuba bengabasebenzisi abavela kwiArcView 3x kunye neMicrostation J, babenomdla wokwazi ukuba kulula kangakanani ukuphumeza isiseko sedatha, ndibabonisile ukuba isebenza njani i-ArcCatalog ye-ESRI, babuza imibuzo esisiseko malunga nokuba kutheni iArcSDE iyimfuneko kwaye yintoni umahluko phakathi I-ArcIMS kunye ne-GIS Server. Xa ndiqala inkcazo yoMlawuli weGeospatial we-Bentley Map bandimamele ngentlonipho, kodwa ekugqibeleni, traroscaron amehlo isiqingatha njengoGarfield kwaye baxelele ezintliziyweni zabo oko abanye bakuxelele ngaphambili:
Ngaba akunakwenzeka kube nzima?
Okwangoku, abasebenzisi beGeographics baneengxaki ukufuduka kwi-Bentley Imephu, kungekhona nje ngenxa yoko kuthetha oko kutshintsho yolwazi okanye ukulungiswa kwezixhobo zenkcubeko, kodwa nangenxa yokuba Readme ayonelanga kwaye akukho zifundo zikhokelwayo zichaza iodolo emayilandelwe. Umzekelo:
Ukuqonda ukuba wenzeni kuMlawuli weGeospatial, apho umsebenzisi, indlela yokumisela imimandla, indlela yokwenza iifom zokondla i-dgn xml, ayisiyonto intle kangako. Ukuqonda nje ubudlelwane bemiGaqo-yokuSebenza-yeNdlela-ye-UI yimeko enzima ku-3 ekuseni.
Ukungakhankanyi ukuqhutyelwa kwimibala yeMephu, kunye neMphathi woMlawuli kunye noMphathi weMephu.
Yintoni eyenzekayo kukuba umsebenzisi we-Geographics ulindele ukufumana amaqhosha njengakudala -ukuba kwakungekho ezininzi ngeendlela-.
Umphathi weMephu uthathe into eyayiyiManejala yokuBonisa, uHlaziyo lweTopoloji ngoku lubizwa ukuba Ngaphezulu, kwaye kule ndawo inye iMephu yeBuff kunye nemephu. Ukuba oko akujongwa ngeglasi yokukhulisa, nabani na unokucinga ukuba iBentley Imephu ayinalo olu hlobo lwemisebenzi.
Emva koko uMphathi weMpawu wayekwiqela elisekunene elaziwa njengeMphathi woLawulo, apho amanqaku angenakucinywa okanye avulwe kodwa enziwe kuphela. Akukho ndlela yokufaka okanye yokususa iimpawu ezinjalo ... ukuqukumbela, kunzima kwabona banamava.
Ndimele ndivume, le nto yokudideka ayitshintshanga kwiminyaka eliqela, xa yayiqala ukuboniswa kum ngaphambi kokuba ibizwa njalo.
Kwakuye kwinkomfa ye-2004 yomsebenzisi, xa kunokwenzeka Xml Fu kukhula Mi-arkup (XFM), esele ibaleka kwiJografi 8.5. Emva kwexesha yabizwa ngokuba yiMephu yeBentley, iqala ngeXM 8.9, kwaye balibiza lonke eli lifa lingasentla. Ngeli xesha, sasinomdla kwisakhono sayo, kodwa kwimbonakalo yokuba sasisesisixhobo esingahlambulukanga, sagqiba kwelokuba siphinde sakhe iinkqubo ezazisenziwa kwiJografi.
Iividiyo eziboniswe ngezantsi zenziwe kwi-2005, ukusuka kuphuhliso lwe-Visual Basic ukusuka kwi-Microstation (VBA) eyenziwa yinkwenkwe enomdla kakhulu, ngelixa i-Bentley idibanisa le misebenzi kwi-XM, apho Ndathetha kuwe iintsuku ezimbalwa
Ukusuka kwii Geographics ukuya kwi-xfm. Ukuba ne-schema eyenziweyo, yahlelwa ukuba idlulise izendlalelo, ukusuka kwiprojekthi yeJografi ebekwe kwi-Oracle, kwachazwa ukuba zeziphi izinto ezifunekayo kwaye zakhiwa ngokuthatha idatha kwi-xml kwi-dgn efanayo. Injongo yayikukuba umasipala abe nedatha kwi-dgn, ngaphandle kokubenza nzima ubomi babo kwindawo yogcino lwedatha apho kwakungekho kunxibelelana.
Thumela ngaphandle kocando lwe-cadastral. Njengakwimeko engaphambili, iimephu zikamasipala zazinokuthunyelwa kwelinye ilizwe, idatha ezisisiseko ezazinomdla kububanzi be-xfm zaya njenge-xml kwi-dgn, phakathi kwazo isitshixo se-cadastral esekwe kwicandelo. Ngale nto, bekulindelwe ukuba benze ulondolozo, emva koko balungelelanise idatha eyahlukileyo eyahlukileyo kwaye yaba ziintengiselwano zolondolozo.
Namathisela imephu kamasipala. Into eyenziwe sesi sixhobo yayikukulayisha ngaphandle kocingo, zonke iimephu ezilingana ngokwejografi, zonke zivela kumanqanaba amabini adalwe kwinyathelo elidlulileyo. Iyafana nento uMphathi weMephu awayeqhele ukuyenza kwinto ebhalisiweyo kwi Kufuphi.
Vala uphinde uvule iziqendu. Umphathi weMaphu uletha lo msebenzi, kodwa ngelo xesha sasingekho enye imithombo ngaphandle kweGeographics kunye noMlawuli weZiboniso, kodwa kulolu hlobo kunye neziqendu ze-XFM.
Uhlalutyo lwe-Topological Ngaloo nto, okwenziwayo kwakungenxa yokuvuselela ukusebenza kwezidalwa zobugcisa kunye nokuhlalutya ebenamaGraographics. Ndingadala iileya zamanqaku, imigca, iipoligoni, kwaye emva koko ndenze umnqamlezo phakathi kwazo
Ndihamba ingxelo ye-HTML. Kamva yahlanganiswa kuMphathi weMaphu, kodwa ndicinga ukuba akukaze kubekho nesikhungo.
Iimpawu. Oku ngoku kuza kuMphathi weMephu, ukuba iiklasi zeNqaku ziyilelisiwe, kodwa ngaphambi kokuba iJografi ikhuphe kwaye ngenxa yoko yaphuhliswa.
Ukuxhotyiswa komntu. Oku bekuvela kwiimpawu zedatha yeOracle, nokuba azifakwanga kwidatha yeXFM. NjengakwiJografi wavunyelwa ukuyila njenge-dgn.
Khangela ngeempawu. Ngale nto, kukhangelwa ezinye iikhrayitheriya, kwaye zazinombala xa kukhethwa. Ikwavumile ukuthumela ingxelo kwi-html.
Uphando lwezoqoqosho. Kuyenzeka ukuba oomasipala abaninzi babenayo ukongeza kwifayile ye-cadastral kuvavanyo lwentlalo noqoqosho, into esiyenzileyo kukuba sisuka kwi-Oracle base, iqhosha lenza ugqithiso lwedatha lwaya kwi-xfm layer. Ngokusekwe kwiinqobo zomxholo, unokubeka iseli eyahlukileyo, esebenzisa into ebizwa ngokuba yiprojekthi "criteria".
Kudluliselwa kwi-centro. Kananjalo, njengoko umasipala, esekwe kwiikhrayitheriya ezithile, ebeka isimboli eyahlukileyo kwi-centroid, yacwangciswa ukuba idatha evela kuvavanyo lwezoqoqosho nezentlalo ingadluliselwa kule centroid. Ewe kunjalo, kuba iphepha elalimele uphando lalilikhulu kakhulu, ibhokisi yencoko yababini ehlengahlengisiweyo kwafuneka ishiywe kuzo zombini iziphelo, ukwenza ividiyo iphambane ngenxa yesayizi yescreen.
Gwema uMlawuli weGeospatial. Ukuqonda ukuba isebenza njani inzima kakhulu, ndixelele umdwelisi nkqubo ukuba asuse into eyoyikisayo, ke kwicala lemephu kunokwenzeka ukwenza uphawu olutsha, ulinike uhlobo, uphawu kunye nebhokisi yencoko yababini eneempawu. Sikunike nenketho yokuba ukwazi ukuhlela into esele yenziwe kwaye usebenzise utshintsho kwizinto ezidalwe ngaphambili.
Omkhulu ukutshaya, le Bentley kufuneka iphumeze okoqobo lezinyo yenza oko ukusuka apho.
Ukulayisha idatha yeVisible Fox. Kwakukho inkqubo kumasipala eyayibizwa ngokuba yi-SIIM, eyayineenkcukacha zefayile ye-cadastral phantsi kwendlela enkulu yovavanyo naphantsi kwegama lesitshixo se-cadastral esekwe kwii-quadrants. Ewe, into esiyenzileyo kukudala ifom eza kufunda idatha kwi-dbf, kodwa kwimephu ye-xfm kwi-Microstation.
Ukupapashwa kwewebhu. Umsebenzi wokushicilela wongezwa kusetyenziswa iGeebeb Publisher, ngokuchola idatha kubhabho kwizaleko ezikhoyo kwi-xfm.
Zonke ezi ngasentla zenziwe nge-Microstation VBA kunye nefakeli eyashiye yonke into isebenza, iprojekthi ye-XFM kunye ne-Geo Web Publisher.
Ngenxa yokuba andiyiyo yonke into:
Okokuqala, ngenxa yokuba kwakungekho thuba lokucwangcisa inkqubo, yenza nje iividiyo. Ngewayonwabile ukusisa kwi-BE BE 2007 yeeBhaso, ngokuqinisekileyo safumana ukutyunjwa njengoko yayiluphuhliso lokuqala kwiXFM.
Emva koko, ukuba ndiyazi ukuba oomasipala abambalwa beza kuwufezekisa, kuba iiprojekthi zikaRhulumente zibuhlungu emva kweminyaka eyi-4.
Okokugqibela, kuba i-Bentley ifuna -kwezi nguqulo ze2008-phucula ukuphuculwa kokusebenza kweMaphu ye-Bentley, ukuba sisixhobo se-GIS -ngombono wam-, ayilungelanga ukuba umntu athenge iphakheji, athathe incwadi yesikhokelo, afune uncedo kwiiforum kwaye amisele inkqubo.
Ekugqibeleni, abahlobo bahamba esinye isisombululo, nangona iindleko zayo.
Uphuhliso lwenziwe kwiSpecial Basic platform eyenza i-Microstation, nge-8.5 version, kwaye iqhume kwi-Geographics 8.5 kunye ne-XFM esele iilethe loo nguqulo.
I-database ya yi-Oracle, i-Bentley Project yoLawulo lweMaphu ehlakaniphile kunye ne-Bentley Geoweb Publisher.
Andiyazi ukuba kukho ikhonkco kwiwebhu apho ungayifumana inkcazelo malunga nokuphuhliswa koko, kodwa into endikwazi ngayo ukusebenzisana nayo.
Ndingathanda ukwazi ukuba senza iimodyuli kunye qu icwangciselwe konke kwaye ukuba ndikwazi ndixelele apho okusemandleni contrar isikhokelo ngezinto did'm ngendlela ezifana nezakho kodwa geographics project MicroStation v8 kwaye kufuneka into har enjengaleyo mbulela ngenkxaso yakho